Qaramada Midoobay oo hambalyo u soo dirtay Gudoomiye mohmed mursal – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaramada Midoobay oo hambalyo u soo dirtay Gudoomiye mohmed mursal
Muqdisho ( mareeg Newa ) Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobey uqaabilsan soomaaliya Ambasdr Micheal Keating ayaa hambalyo waxa uu udiray afhayeenka cusub ee Golaha shacabka, kaa oo shalay Muqdisho lagu doortay.
Ambadr Keating ayaa sidoo kale ku amaanay xildhibaanada Golaha shacabka qaabka daahfurnaanta leh ee ku guteen waajibkooda.
Dhanka kale Micheal Keating mahadnaq ayuu usoo jeediyay gudoomiyihii hore ee Barlaamanka Pro Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari kaa oo soo hogaaminayay Barlamaankii 9-aad iyo kan tobnaad ee xiligan shaqeeya.
Ambasador Keating ayaa kula darmaamay dhinacyada hardanka siyaasadeed ee soomaliya uu ka dhaxeeyo in ey had iyo jeer ilaaliyaan sareenta sharciga, taana ey muhiim utahay baraaraha iyo horu usocdka umadda soomaaliyeed.
Maalinimadii shalay aheed kadib muddo barlamaanka shaqadiisu ey habac iyo jahawareer siyaasadeed ey gashay kadib waxaa la doortay gudoomiye Maxamed Mursal Sh Cabdirahman oo dhawaan iska casilay xilka wasiirka difaacca soomaaliya.